Pejy fandefasana elefanta hampidinana sy handoko maimaim-poana
Ny biby dia iray amin'ireo motera malaza indrindra amin'ny pejy fandokoana ankafizin'ny zaza ary tsy zava-poana fa ny biby fiompy dia hita ao amin'ny tokantrano maro. Fa ny tena biby dia sy mampidi-doza koa dia malaza amin'ny ankizy fandokoana.
Pejy fandokoana elefanta
Ary tsy noho ny elefanta Törööö kely miteny kely fotsiny, ireo elefanta lehibe miendrika cozy dia misarika ny saina manokana avy amin'ny ankizy. Ny habeny sy ny vatan-kazo tsy mahazatra fotsiny dia mahatonga ireo pachyderms ho lasa mpitia malaza amin'ny pejy fandokoana. Ny tsindry iray amin'ireto rohy manaraka ireto dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny maodely fandokoana:
Ahoana ny fandokoanao elefanta?
Elefanta kely misy vatan-kazo
Elefanta miaraka amina voninkazo
Lohan'ny elefanta mozika
Teny lakile fanampiny: elefanta, elefanta,